तपाईंको क्यानडा क्यानाडा ठेगाना ठेगाना कसरी परिवर्तन गर्ने?
तपाईं क्यानाडामा जानु हुँदा तपाईंको मेलिङ ठेगाना परिवर्तन गर्न सजिलो तरिका
जब तपाईं सार्नु हुन्छ, तपाईं आफ्नो मेलिङ ठेगाना अनलाईन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र क्यानाडा पोस्टबाट मेल अग्रेषण उपकरण प्रयोग गरेर तपाईंको मेल रिडाइरेक्ट गर्नुहोस्। प्रक्रिया सरल छ, र शुल्क एक जस्तै हो जब तपाईं पोल ​​आउटलेटमा एक फारम भर्न को लागी भुक्तानी गर्नुहुन्छ। मेल अग्रेषणको लागत तपाई कहाँ जानुभएको हुन्छ, र फरक लागतहरू व्यक्ति र व्यवसायहरूमा लागू हुन्छ।
तपाईं एक स्थायी ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईको मेललाई 12 महिनासम्म अगाडि बढाउनु हुनेछ, वा यदि तपाइँ विस्तारित छुट्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ वा दक्षिणमा हिउँदिरहनु हुन्छ भने अस्थायी ठेगाना परिवर्तन हुनेछ।
उपकरणले तपाईंलाई ठेगाना परिवर्तनको बारेमा जानकारी दिएको छ कि छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको मेल फर्वार्डिङ अनुरोध फाइल गर्दा
आवासीय चालहरूको लागि, तपाईले तपाइँको अनुरोध कम्तीमा पाँच दिन अगाडि सार्नु पर्छ। व्यापार चालका लागि, तपाईले तपाइँको अनुरोध कम्तीमा 10 दिन अघि अघि पेश गर्नु पर्छ। क्यानाडा पोस्टले तपाईको अनुरोध दायर गर्न अनुरोध गरेको 30 दिन अघि सम्म चक्रको अर्को प्रकारको।
ठेगाना अनलाइन सेवाको परिवर्तन प्रयोग गरी प्रतिबन्ध
ठेगाना परिवर्तनको लागि अनलाइन सेवा केही उदाहरणहरूमा उपलब्ध छैन। उदाहरणका लागि, मेलहरू ग्राहकहरूलाई सम्बोधित गर्ने जुन साझेदारी पोष्ट ठेगाना मार्फत मेल प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसमा व्यक्तिहरूसँग व्यापार, होटल, मोटल, कोठामा घर, नर्सिङ गृह, अस्पताल वा स्कूल जस्ता संस्थाहरू मार्फत मेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू समावेश गर्दछ; व्यवसायहरू एक साधारण हुलाक ठेगानाको साथ; र मेल निजी प्रशासित मेलबक्सको माध्यमबाट प्राप्त भयो।
विलम्बित साझेदारी, तलाक र समान परिस्थितियों को मामला मा, यदि मेल प्राप्त गर्नु पर्छ मा विवाद हो भने क्यानाडा पोस्ट को दुवै पक्षहरु द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त लिखित समझौते को आवश्यकता हो।
यदि प्रतिबन्धहरू तपाईंको स्थितिमा लागू हुन्छ भने, तपाईं अझै पनि आफ्नो स्थानीय पोष्ट आउटलेटमा जान सक्नुहुन्छ र एक फारम भरेर तपाईंको मेल सामान्य तरिकामा रिडिरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं क्यानाडा पोस्ट मेल फर्वार्डिंग सेवा पुस्तिकामा थप जानकारी पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
ठेगाना परिवर्तन कसरी गर्ने वा एक विस्तार परिवर्तन विस्तार गर्नुहोस्
क्यानाडा पोष्टले तपाइँलाई तपाइँको अनुरोध अनलाइनमा परिवर्तनहरू र अपडेटहरू सजिलैसँग दिन्छ।
थप मद्दत प्राप्त गर्दै
यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ वा ठेगानाको ठेगाना परिवर्तनको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने क्यानाडा पोस्ट ग्राहक सेवा अन्वेषण फारम भर्नुहोस्। मेल फर्वार्डिङ सेवाको बारेमा सामान्य प्रश्नहरूको बारेमा canadapost.ca/support मा फोन वा 800-267-1177 मा फोन गरेर निर्देशित हुनुपर्छ।
तपाईंको व्यक्तिगत क्यानाडा आयकरहरु को भुगतान को5तरिका
डा। रोर्टा बन्डर को हुनुहुन्छ?
माइकल जेनको जीवनी
सांस्कृतिक राजधानी के हो? के मैले गरेको छु
Ikkyu Sojun: जेन मास्टर
धर्म व्हील (धर्माचक्र) बौद्ध धर्म मा प्रतीक
दोस्रो विश्वयुद्ध: बाटानको युद्ध
ओलिन कलेज प्रवेश
मृत्यु "हेमलेट" मा
Quad टैक्सी ट्रक
प्रसिद्ध व्यक्तिहरु द्वारा धेरै राम्रो उद्धरण
आतंकको कथाहरू क्याम्पिङ गर्दै
1968 को दगेम्याम महिला हड़ताल
सबै भन्दा कठिन महाविद्यालयहरू प्राप्त गर्न
ओरेगनको बारेमा भौगोलिक तथ्यहरू
हिन्दू क्यालेन्डरको6मौसमहरूको लागि एक गाइड
ट्रिन: प्राकृतिक अनुग्रह र आरोहणको पक्ष
फ्रैंकलिन र मार्शल कलेज प्रवेश
A नोभेना देखि सेन्ट एंथनी मैरी क्लारा
कसरी कन्जुगमेसन "प्लेयर" (कृपया कृपया) फ्रेन्चमा
धीरजको लागि प्रार्थना
ला भ्यास! - फ्रांसीसी अभिव्यक्तिले बताएको छ
ऐतिहासिक अमेरिकी जेल रेकर्डहरू अनलाइन
होलो नाम अर्थ र उत्पत्ति